Samachar Batika || News from Nepal » श्रीमतीका कारण श्रीमानले छोडे संसार
धरान । श्रीमतीले धो’का दिएपछि दे’हत्याग गरेका भनिएका प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको श्रीमती र उनको प्रेमी वि’रुद्ध मु’द्दा दायर भएको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश शंकर राईका अं’गरक्षक प्रहरी हवल्दा खतिवडाले दे’हत्याग गरेका थिए । प्रहरीले खतिवडाको श्रीमती दीक्षा खतिवडा र उनका प्रेमी भनिएका विशाल तामाङ वि’रुद्ध मु’द्दा दर्ता गरेको हो ।
परिवारका सदस्यले उनको निध’नमा श्रीमतीकै कारण देहत्या’ग गरेको आ’रोप लगाएका थिए । प्रहरीले दुवैजनालाई प’क्राउ गरि अ’नुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनु’सन्धानवाट उनीहरु दो’षी देखिएपछि मु’द्दा दायर गरेको हो ।
हबल्दार खतिवडाले दे’हत्याग गर्नुको कारण श्रीमती दीक्षा र विशालबीचको नराम्रो रहेको प्रहरी अ’नुसन्धानवाट खुलासा भएको छ। खतिवडाको श्रीमती दिक्षाको उर्लावारी–९ का विशाल संग दुईवर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरी अ’नुसन्धानवाट खुलेको हो ।
श्रीमतीको नराम्रो सम्बन्ध थाहा पाएका प्रहरी खतिवडाले त्यसैको दुख सहन नसकेर यस्तो गरेको देखिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले बताएका छन् । उनीहरु बि’रुद्ध देह’त्या’ग गर्न बा’ध्य पारिएको सम्बन्धि मु द्दा दर्ता गरेर का’रवाही अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हवल्दार खतिवडाले गत असार १६ गते राति जिल्ला अदालत सुनसरीको छतमा दे’हत्याग गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार, ‘मृ’तक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शं’का गर्दै आएका थिए । श्रीमती दीक्षा र विशालकै कारण उनी डि प्रेसनमा पुगेका थिए ।
’ कल डिटेल अनुसार दे’हत्याग गरेको समयमा उनले श्रीमतीलाई र विशाललाई फोन गर्दा लामो समय दुबैको मोबाइल व्यस्त भएपछि डि प्रेसन र आ’वेशमा आएर आफैले दे’हत्याग गरेको प्रारम्भिक अ’नुसन्धानबाट खुलेको छ । दु’रुत्साहन आ’रोपमा प’क्राउ परेका विशाल तामाङ खतिवडाकै छिमेकी हुन् ।
देह’त्याग गर्नु अघि ओम प्रकाशले दीक्षालाई पनि फोन गरेको र विशाललाई पनि फोन गरेर मेरो जिन्दगी ब’र्बाद पा’रिस श्रीमतीलाई लगर राम्रोसँग पाल भनेका थिए । श्रीमती दिक्षाको तामाङसँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि ओमप्रकाशले बारम्बार सम्झाएको पनि अ’नुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीसंगको ब’यानमा पनि दुवै जनाले आफुहरुको प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुबीच शा’रि’रीक स’म्बन्ध पनि रहेको प्रहरी सामु स्वी’कार गरेको प्रहरीले जनाएका छन् ।
प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको देहत्या’ग घ’टनाले नयाँ मोड लिएको छ । उनले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडीको पाटा खुल्दै जान थालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी–९ राजघाटका हवल्दार खतिवडाले देहत्या’ग गरेका थिए । उनका दाई , दिदी लगायत परिवारका सदस्यले घ’टनाको कारणवारे अचम्म लाग्दो व’यान दिएका छन् । श्रीमानले दे’हत्याग गरेको घट’ना सुनाउन जाँदा उनको श्रीमतीले अनौठो कुरा भनेकी थिइन् ।
ओमप्रकाशको दिदीले पनि श्रीमतीलाई अति माया गरेको भाईले बुहारीवाट घा’त पाएपछि देहत्या’ग गरेको बताएकी छन् । एकतर्फी माया गरेको मान्छेले नै घा’त गरेपछि अ’सह्य भएको हुनसक्ने बताइन् । उनले बुहारीकै कारण घ’टना भएको दावी गरेको बताएका छन् । प्रहरीले बुहारी दीक्षा खतिवडा र उनकी प्रेमी भनिएका विशाल तामाङलाई प’क्राउ गरी मु’द्दा चलाएको छ । असार १६ गते आफैले देहत्या’ग गरेका थिए । ‘मृ’तक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शं’का गर्दै आएका थिए ।
जवान छोराको अचानक नि’धन भएपछि बृद्ध आमावुवा चिन्तित छन् । वृद्ध अवस्थामा जिवनको सहारानै खोसिए पछि बुवा काशीनाथ र आमा निर्मला दुखी भएका छन् । आमाबुवा अलग्गै बस्छन् । केही दिन अघि मात्र ओमप्रकाश वुवाआमालाई भेट्न आएका थिए । बुवा आमाले खाना खाएर जाउ भन्दा पनि मानेनन् । बुहारीसंग राम्रो सम्बन्ध पनि नभएको सुनेका थियौं । हामीसंग नबस्ने भएकाले दिनहुँ भेट पनि हुदैनथ्यो बुवा काशीनाथले भनेका छन् ।
उनले बुहारीले नै घट’ना गराएको हुनसक्ने आशं’का गरेका छन् । घट’नास्थलमा पनि शं’कास्पद अवस्था भएको आफुले थाहा पाएको पनि बताएका छन् । आमाले दही केरा खाएर जा भन्दा पनि हतार गरेर ड्युटी गर्न गएको छोरा किन म’र्यो ? बुवा भन्छन्, आफ्नो ज्यानको माया नै मा’रेको थियो भने आमाले दिएको खानेकुरा खान पनि हतार गरेर किन ड्युटीमा जान्थ्यो ?
आमा निर्मलाले आफनो छोरा कहिल्यै झ’गडा नगर्ने स्वभावको भएको बताइन् । उनले श्रीमतीसंग नै कुरा नमिलेका कारण मन भरिएर आफैलाई समाप्त पारेको बताइन् । बृद्ध आमा बुवाले बुहारीकै कारण छोराको ज्यान गएका कारण उनलाई स’जायको माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति ५ श्रावण २०७७, सोमबार ०४:२८